Kubhuntshe owe-hockey yezikole
sithembiso mkhize | March 24, 2020
UMASHAYABHUQE womkhuhlane iCovid-19 uhlehlise umqhudelwano waminyaka yonke okuhloswe ngawo ukufundisa intsha ngomdlalo we-hockey.
UNkosinathi Ngubane ongusihlalo we-INK Hockey Club utshele Isolezwe ukuthi lolu bhubhane lubagqeme ingozi engeqiwa ntwala njengoba kubaphoqe ukuthi bahlehlise umqhudelwano waminyaka yonke iHuman Rights Day Hockey Festival.
Lo mqhudelwano obekuzoba unyaka wesihlanu wenziwa, bekemele udlalwe ngoMgqibelo odlule eNew Center Sports, eNewlands.
Kuwo bekuzoqhudelana izikole zaKwaMashu, Ntuzuma, Newlands West, uMlaza, Mgababa nezaseClermont kusukela ku-Under 12 kuya ku-14 kubona bobubili ubulili.
UNgubane obuye abe wuthishanhloko eBonisani Primary School kwa-G, eNtuzuma, uthe ukuhlehla kwale midlalo kubalimaze kakhulu ngoba bese zenziwe izinhlelo.
Uthe ngaphandle nje, kokuthi kuwo kufundiswa izingane ngamalungelo azo kodwa ulima enkulu indima ekufundiseni intsha emnyama ngomdlalo we-hockey.
“Nakuba singithokozisa isibalo sentsha ensundu esijoyine i-hockey kodwa usemkhulu umsebenzi okusamele wenziwe. Empeleni nje kusabusa abamhlophe nezinye izinhlanga. NgeHuman Rights Day Hockey Festival sithola ithuba lokufundisa intsha yakithi ngalo mdlalo. Ngenxa yalo mqhudelwano kule minyaka emine edlule sikwaze ukuheha inqwaba yentsha emnyama ukujoyina lo mdlalo,” kubeka uNgubane oqale ukuzibandakanya ne-hockey ngo-1993.
Lesi sikhulu siveze nokuthi basaba ukuthi neligi ye-outdoor, okumele iqale ngo-Ephreli iphele ngoSepthemba ngeke iqale ngesikhathi ngenxa yeCoronavirus.
UNgubane uveze ukuthi nakuba zikhona izingqinamba kulo mdlalo ezifana nobandlululo kodwa weneme ngosekuzuzwe i-INK Hockey Club eyasungulelwa ukusiza izingane zaseNanda, Ntuzuma neKwaMashu.
Uthe kukhona abadlali asebethole imifundaze okukhona kubo uNduduzo Mchunu, Nkanyiso Buthelezi, Nhlanhla Nyawo asebewuqedile umatikuletsheni. Kukhona noSihle Ngubane, Mpumelelo Nkosi, Loyiso Nzama,Mlondi Shange abebenza umatikuletsheni nyakenye eGlenwood Boys.
UMfundo Mzobe ubefunda eDurban High School (DHS), manje usefunda e-University of KwaZulu-Natal (UKZN) ngawo umfundaze.
Ngo-2014 abadlali bale kilabhu bamela iTheku kuma-United World Games abase-Australia ngeqembu lika-Under 12. Bahlulwa yiGerman kowamanqamu. Leli qembu lacoboshisa iCroatia, Turkey, France, ne-Ireland. UNgema okuthe ngo-2006 waklonyeliswa yihhovisi likandunankulu ngendondo yeVolunteer of the Year, uthe uyajabula ngoba sekukhona iqembu labo elidlala esigabeni esiphezulu seligi yakuleli ye-hockey kanti kukhona neliyibamba kwesingaphansi, okubhekwe ukuthi linyukele kwesiphezulu maduze.
Lesi sikhulu siveze ukuthi zihamba kahle izingxoxo noMnyango wezeMidlalo ngokubakhela inkundla ye-hockey.